यो एप्पल लोकेटर र चश्मा कसरी कार्य गर्दछ आईफोन समाचार
यो सेप्टेम्बर १० मा अर्को प्रस्तुतीकरणको आश्चर्यकर्म हुन सक्छ। हामी यो स्वीकार्य रूपमा लिन्छौं कि हामी नयाँ आईफोन र एप्पल वाचको नयाँ जेनेसन देख्छौं कुनै ठूलो समाचार बिना टायटानियम र सिरेमिक्स बाहेक नयाँ समाचार। तर पछिल्लो केहि दिनहरुमा नयाँ अफवाहहरु जोडिए दुई नयाँ उत्पादनहरू: एक लोकेटर र एप्पलको संवर्धित वास्तविकता चश्मा.
लोकेटर (एप्पल ट्याग?) हराउने सम्भावित कुनै चीजमा यसलाई राख्न प्रयोग हुनेछ (एक ब्याकप्याक, कुञ्जीहरू, वालेट, एक बच्चा?) र कुनै पनि समयमा यसलाई पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछ। संवर्धित वास्तविकता चश्मा वर्षको ठूलो हिट हुन सक्छ। यी उत्पादनहरू कसरी काम गर्दछन्? हामी यसलाई तल देख्छौं।
1 एक उत्तम अफलाईन लोकेटर
2 संवर्धित वास्तविकता चश्मा
एक उत्तम अफलाईन लोकेटर
लोकेटर ती धेरै समान उत्पादनहरू हुन् जुन टाईलले पहिले नै प्रस्ताव गर्दछ। एक सानो गोलाकार उपकरण, सेतो, केन्द्रमा एप्पल लोगोको साथ, त्यो NFC र ब्लुटुथ ले जडान हुनेछ, केही प्रकारको ब्याट्री वा ब्याट्री, ध्वनी उत्सर्जन गर्न सक्षम हुन एक स्पिकर र यसैले हामी नजिक हुँदा यसलाई फेला पार्दछौं, र भित्र काम गर्ने iOS को एक कम संस्करण।
तर सबै भन्दा आश्चर्यजनक कुरा यो कसरी कार्य गर्दछ। यो सानो उपकरण कुनै पनि तत्वमा राख्न सकिन्छ र यो जहाँसुकैबाट पनि अवस्थित गर्न सकिन्छ, इन्टरनेट जडान बिना नै। कसरी गर्ने? हामीले अर्को दिन बुझाउ्यौं कि आईफोनको स्थानले काम गर्दछ जब यो आईओएस १ in मा कभरेज छैन।
यो ब्लुटुथ मार्फत नजिकैको कुनै पनि एप्पल उपकरणसँग जोड्नेछ, जो कोही पनी पास हुन्छ, र त्यो उपकरण त्यस्तो हुन्छ जसले यसको इन्टरनेट जडान प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं यसलाई विश्वको कुनै पनि स्थानबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईं टाढा भए पनि। । तपाइँ यो सबै "खोज" अनुप्रयोगबाट गर्न सक्नुहुन्छ जुन आईओएस १ with को साथ आउँदछ। त्यहाँ एक नयाँ ट्याब, "आईटमहरू" (लेखहरू) हुनेछ जहाँ तपाईं यो लोकेटर मार्फत चिह्नित सबै चीजहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको आईक्लाउड खातामा यी लोकेटरहरू सम्बद्ध गर्नाले तपाईको एयरपडहरू वा होमपडको जोडी जत्तिकै सजिलो हुनेछ, तपाईको मोबाईललाई नजीक ल्याउने। यस गेस्चरको साथ, जो कोहीले यसलाई फेला पार्छ मालिकको नाम र सम्पर्क जानकारीको साथ तिनीहरूको स्क्रीनमा सन्देश देख्दछन्। यदि लोकेटर हराएको मोडमा छ भने, यो इशारा आवश्यक छैन, किनकि जब एक एप्पल उत्पादन को साथ को लागी छ को लागी तिनीहरूले हराएको उत्पाद को सचेत एक सन्देश प्राप्त गर्नेछ र सम्पर्क विवरणहरू देखाउँदै।
यो मात्र होईन, हामी हाम्रो लोकेटरहरू संवर्धित वास्तविकता प्रयोग गरेर पनि देख्न सक्छौंहाम्रो आईफोनको क्यामेराको साथ एप्पल चश्मा पनि अवश्य उपलब्ध हुनेछ, जुन हामी पनि यस प्रस्तुतीकरणमा देख्न सक्छौं र जुन हामी अब विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नेछौं।
संवर्धित वास्तविकता चश्मा
एप्पलले यसको एआर गिलास पनि प्रस्तुत गर्न सक्दछ, यद्यपि यो त्यस्तो चीज हो जुन धेरै व्यक्तिले कम्पनीसँग घनिष्ठ सम्पर्कको साथ प्रश्न गरेका छन्। त्यहाँ क्लासिक भर्चुअल वास्तविकता चश्मा जस्तै उपकरणको कुरा गरिएको छ त्यो हामीलाई थाहा भइसकेको छ। सायद एप्पलको अगस्ट गरिएको रियलिटीमा पहिलो एक्सेसरी भनेको एक्सेसरीको साथ हो जुन आईफोन र यसको नयाँ ट्रिपल क्यामेरा जस्ता उपकरण प्रयोग गर्दछ। यसका बारे केही स्पष्ट छैन।
एप्पलले गरिरहेको आन्तरिक परीक्षणबाट के थाहा हुन्छ, त्यो हो त्यहाँ अनुप्रयोगहरू छन् जुन "स्टीरियो एआर" को लागि तयार छन्। (स्टेरियो संवर्धित वास्तविकता) र त्यो दुई फरक तरीकाले कार्य गर्न सक्दछ: जब हामीसँग हाम्रो हातमा उपकरण छ (आईफोन) र जब हामी यसलाई हाम्रो अनुहारमा अर्को सहयोगीको साथ राख्छौं। स्टीरियो एआर को लागी पहिले नै तयार केहि अनुप्रयोगहरू नक्सा, खोज र एक नयाँ क्विक लुक एआर हो जुन वेब सामग्रीको साथ काम गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » यो एप्पल लोकेटर र चश्मा कसरी कार्य गर्दछ
लोकेटरको विचार मलाई ठूलो लाग्दछ तर…। किन कुनै पनि एप्पल प्रयोगकर्ताले आफ्नो उपकरण एक गेटवेको रूपमा अनिवार्य रूपमा छोड्नु पर्छ र एप्पललाई कुनै शुल्क बिना नै उनीहरूले नगद कमाउने सेवा प्रस्ताव गर्न सक्छन्?
के ती हामीलाई डेटा कनेक्शन र हाम्रो उपकरणको उपलब्धता र प्रयोगको लागि भुक्तान गर्दैछन्?
के उपकरणहरूको मालिकले यो प्रकार्य अक्षम गर्न सक्दछ?
म आफूलाई दोहोर्याउँछु। विचार धेरै राम्रो छ तर मलाई लाग्दैन कि यो सही छ कि तिनीहरू मेरो आईफोन र मेरो डाटा जडान प्रयोग गरेर पैसा कमाउन चाहन्छन् जुन कि मेरो यूरोले मेरो लागि खर्च गर्‍यो।
अब ... सबै कुराकानी योग्य छ ... कि तिनीहरूले मलाई मेरो सेवाहरूको सट्टामा उनीहरूको कुनै पनि भुक्तानी सेवाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। आईक्लाउड, एप्पल संगीतको लागि अतिरिक्त भण्डारण ...
तपाईंको उपकरण सँधै आफैंमा पत्ता लगाइरहेको छ र स्थान एप्पलमा पठाउँदै छ, त्यसैले यो याद राख्छ जब तपाईं आफ्नो कार पार्क गर्नुहुन्छ, वा तपाईंलाई तपाईंको स्थानमा आधारित सुझावहरू दिन्छ, वा यदि तपाईं घर पुग्दा यो प्रकाशको साथ होमकिट छ भने प्रकाशमा फर्कन्छ। यसले तपाइँको लागि कुनै अतिरिक्त खर्च समावेश गर्दैन। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ असक्षम गर्न एक विकल्प हुनेछ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, उही समान तपाईं अब यसलाई अक्षम गर्न सक्नुहुनेछ।
एप्पलले मलाई मेरो उपकरणहरू पत्ता लगाउने सेवा प्रस्ताव गर्दछ केहि चीज हो जुन मलाई चासो लाग्न सक्छ वा सक्दैन।
अब, कि एप्पल मेरो उपकरण र मेरो डेटा कनेक्शन को उपयोग गर्न चाहान्छ तेर्सो-पार्टी उपकरणहरू मेरो सहमति बिना खोज्नको लागि जुन मैले बुझिन।
एप्पलले मलाई थप भण्डारण दिदैन जुन मैले आईक्लउड वा एप्पल संगीतको लागि भुक्तान गर्दछ। किन म तपाईंलाई मेरो उपकरण नि: शुल्क प्रयोग गर्न दिनुहुन्छ?
होईन, एप्पल कार्ड केवल टाइटेनियम मात्र होइन, जोनी इभले आफ्नो एल्युमिनियम स्ट्याम्प छोडे